Ulapha: Ikhaya / Amabhakede e-PVC (PET) / Amabhokisi we-Round Tin / Amathini Amathoyizi, Imali Nemali / I-Bucket yangokwezifiso ze-White White ngeHandle futhi Ilahlekile Ukudla Kwezilwane Zasekhaya
Leli bhakede le-PET eliphethe isibambo ngokuphrinta noma alikho lokuphrinta ukufeza isikhundla sokuma eshalofini. Iklayenti lethu lalidinga umzimba we-PET ngesigaxa se-tin kanye nangaphansi ukuze babambe iphakethe lokuphromotha labadayisi bezitolo. Senze le tinthi ye-PET ngentambo ekhanyayo ebonakalayo engayibona imikhiqizo engaphakathi, ngesembozo sensimbi yesiliva esinezimpawu ze-emboss logo nangaphansi, ukubukeka okumnandi. Sijabule kakhulu ukuthola ukuthi amakhasimende asebenzisa amathini ngemuva kokugcina izinto, okuyindlela enhle yokubakhumbuza ngomkhiqizo wakho.
Into Yomkhiqizo: Ibhakede le-PET elinesibambo
Akukho ukuphrinta + isembozo sesiliva nangaphansi
Zonke 5 /Amathoni e-Aluminium 0 /Amabhisikidi namathini Amakhukhi 0 /Amabhakede 0 /Amathini Amakhekhe 0 /Amathangi ekhandlela 0 /Amathini Amakhekhe Nama-Mint 0 /Amabhokisi we-Chocolate Tin 0 /Amathanga kagwayi 0 /Amathofi wekhofi 0 /Ibhokisi Lezimonyo 1 /Amapakeji Okuphakisha Ukudla 0 /Isipho, Amathikithi Okuphromotha 0 /Imikhiqizo Eshisayo 1 /Amabhokisi we-Tin angajwayelekile 0 /Amathiphu we-Lunch 0 /Ipensela, Amathenisi wezinto zokubhala 0 /Ibhokisi le-pet Food Tin 0 /Amabhakede e-PVC (PET) 0 /Ibhokisi Lezinhlaka Eziyindilinga 0 /Amabhokisi we-Round Tin 5 /Amabhokisi Esikwele 0 /Amathiphu Tea 0 /Ibhokisi le-Tin Box 0 /Amathini Amathoyizi, Imali Nemali 0 /Ithreyi, Ibhakede, Coaster, Isiginali ye-Tin 0
Ikhasinkomba 1 of 27123>»
Amabhuthi we-Mini Pet Tin Pail Onesibambo Ngokupakishwa Kwezipho Amabhasikidi e-Metal e-Colored enziwe ngezifiso aphethwe futhi Abelwe Ukugcinwa Pheqa phezulu